ikhaya AMANQAKU E-FOOTBALL AMAZWE Abadlali bebhola ekhatywayo abangamaNgesi I-Kyle Walker-I-Peters Ibali leNkcazo yeNgxelo ye-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-Football Genius eyaziwayo ngegama "Kyle". Ibali lethu leKyle Walker-Peters Childhood Indaba kunye ne-Untold Biography Facts ikuleta i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela ngexesha lakhe lokuzalwa. Uhlalutyo luquka ubomi bakhe bokuqala, imvelaphi yentsapho, ibali lobomi phambi kobuqili, ukuphakama kwindalo, udlelwane nobomi bomntu.
Ewe, wonke umntu uyazi ukuba ungumdlali onamandla amakhulu ngekamva. Nangona kunjalo, bambalwa abambalwa uKyle Walker-Peters 'Biography enomdla kakhulu. Ngoku ngoku ngaphandle kwee-ado, masiqale.
I-Kyle Walker-I-Peters Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts- Ubomi bokuqala kunye neNtsapho yaseMvelaphi
Ukuqala, igama lakhe elipheleleyo nguKyle Leonardus Walker-Peters. Wazalwa ngomhla we-13th ngo-Ephreli 1997 kunina, uMary Walker-Peters noyise, uDennis Walker-Peters kwi-Greater London kwingingqi yase-Edmonton, eUnited Kingdom.
U-Kyle wazalelwa kwiqela laseBrithani eliMnyama eliqhuba imvelaphi yentsapho ephakathi. Ngokweengxelo ze-intanethi, intsapho yakhe ingavela eJamaica.
U-Kyle wakhula njengomfana ozolileyo kwaye ozolile, umzekelo awawuthabathela kuyise, uDennis. Bobabini abazali, uDennis noMary babenomkhuba wokugcina unyana wabo uqiniseke ukuba ulandele indlela efanelekileyo, equka ukuba nemfundo.
Ukukhula malunga neTottenham, intsapho kaKyle Walker-uPeter wayebancedi abaninzi beArsenal ngaphandle kwakhe kunye neentsapho ezimbalwa ezazixhasayo abaseTttenham.
Isinqumo sikaKyle Walker-Peters sokuba ngubuchule bevela kumalume wakhe, uFilippi Leonardus Walker owayengumdlali webhola wezemidlalo kunye noMillwall noCharlton Athletic.
Ngoku kwi60 yakhe ngexesha lokubhala, uPhillip owaba ngumqeqeshi webhola wakhuthaza umntakwabo uKyle ngokuthatha inxaxheba kwimisebenzi yebhola njengomntwana. Emva kokufumana umdla kumdlalo webhola lebhola, uFilipu waqinisekisa ukuba umntakwabo omncinane wayilandela indlela efanelekileyo njengoko wayefuna inkxaso ngokupheleleyo ngabazali bakhe abavumelene nemeko yokuba unyana wabo akanakuyithintela imfundo yakhe yokuqeqeshwa kwebhola.
I-Kyle Walker-I-Peters Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts- Ubomi bokuqala
Uthando lukaKyle lwebhola lwambona ebhalisa kwaye enesilingo esiyimpumelelo kunye no-Spurs njengomphakathi ohlaselayo. U-Kyle akayi kujoyina iTttenham ukuba akafumane uncedo kumhlobo ka-malume wakhe uBryan King owayengumgcini wakhe wangaphambili kunye nomlingani waseMillwall. UBryan onokuthi u-71 (njengokuba ngexesha lokubhala) wayeyi-scout kwi-Spurs ngexesha uKyle Walker-Peters wancediswa.
Xa uKyle eqale eTottenham, akazange abekwe njengomnye wabadlali abalungileyo kwiqela lakhe elidala. Nangona kunjalo, ubomi baseTittenham bebehlekisa ekuqaleni. Kamva kamva, uKyle wabona ukuba kwakufuneka enze imibingelelo eninzi. Kwakukho amaxesha ekufuneka abe yedwa ofunyanweyo engekho kwimikhosi yokuzalwa. UKyle Walker-Peters wayenelisekile ubomi bakhe kuba wayeva ukuba wenza into ayithandayo; ukuba "Ukudlala ibhola."
Ukulawula Ubomi bakhe bokuqala ngeSpurs:
Kwamanye ukulawula ubomi bakhe, u-Walker-Peters kwafuneka aphile kwi-digs kunye nomhlobo onomdla. Wahlala noMilos Veljkovic, umdlali waseSerbia (ochazwe ngezantsi) odlala noMerder Bremen njengokuba ngexesha lokubhala.
"Ukuhlala noMilos Veljkovic kwandinceda ukuba ndizimelele. Kwafuneka ndihlambe kwaye ndipheke ukutya kwasekuseni. Amava anjalo anceda ngokwenene. " uthe uKyle Walker-Peters
Ngoxa uKyle eqhubela phambili kwiminyaka yobudala, abazali bakhe baqhubeka beqhubela imfundo kuye ukuqinisekisa ukuba uyigqibile kwinqanaba. Ngokutsho kukaKyle ...
"Ndigxile kwimfundo ngelixa ndidlala ibhola kuze ndifike kwi-16. Ndiqiniseke ukuba ngamabakala amahle. Emva koko, ndakwazi ukugxininisa kuphela kwibhola lebhola kwaye endibanceda ngokwenene. "
Emva kwemfundo yakhe, kwakuyixesha lokuba uKyle alwe nendlela yakhe yokufumana isivumelwano kunye neTottenham. Oku kwavela isahluko esitsha ebomini bakhe.
I-Kyle Walker-I-Peters Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts- Indlela eya kwiSifa
Ukuthatha amaQela aKhe njengezitha:
Kwaba lukhulu kangangokuba u-Kyle Walker-uPeter ohlala naye u-Miloš Veljković wenziwa ukuncintisana naye kunye nabanye abadlali kwindawo ethile yeqela le-Spurs yolutsha. Kwakukho abadlali abaninzi abadlala kwindawo efanayo ebonisa intsalathiso kwizidingo ze-Spurs. Ngako oko, ukhuphiswano lwaba yinto ebalulekileyo kunye neyona nto ebalulekileyo ngaphakathi kweSpurs academy setup.
"Ndizama ukuphucula kwindlela yam yokusebenza eyayiyindlela yokufumana abanye abadlali kwindawo yam ngaphandle kwebhula. Ubawo wayenempembelelo enkulu. Uya kuhlala esithi, 'akukho zihlobo ebhola lebhola, unokuba ngumhlobo, kodwa awuyi kuba nabahlobo'. Ukususela kuloo mzuzu, ndaqonda ukuba kufuneka ndizingca. " Uthi uKyle Walker-Peters FourFourTwo Ingxelo.
I-Kyle Walker-I-Peters Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts- Ukunyuka Kwigama
Emva kokufunda ukuzondla kunye nokuphila kwendalo, uKyle Walker-Peters wazibonela phambili ngokukhawuleza okubangela ukuba ahlonishwe ngamazwe ngeNgilani ngaphantsi kwe-18 kunye ne-Under-19s.
Uyazi indlela yokusingatha izinto nakwiimeko ezilukhuni kunye noxinzelelo oluqhubekayo lokuba ngumphezulu womdlalo wakhe konke egameni lekontileka yezakhono.
Kuwo wonke uhambo lwe-Walker-Peters uhambo lokufumana isivumelwano sekhontrakthi, omnye umntu ophawulekayo uya kuhlala ebulela kuye kungekho mnye u-Ugo Ehiogu owayengumqeqeshi weqela le-Tottenham Hotspur U23. Ngokubuhlungu, u-Ehiogu wasweleka ngomhla we-21 ka-Ephreli 2017 emva kokubanjelwa kwintliziyo e-Spurs.
Emva kwenyanga emva kokufa kwakhe, ukhuphiswano lwekomiti yehlabathi ye-U20 beza kubiza uKyle Walker-Peters wakhethwa ukumela iNgilani. Yena kunye kunye nabo beqela kunye ne-Chelsea Callum Hudson-Odio wanceda eNgilani ukukhusela iNdebe yeHlabathi ye-Under-20s.
Ekhutshwe yiNtshontsho yeNdebe yeHlabathi ye-U20, u-Walker-Peters wavelisa i-streak enobudlova kwi-academy yakhe. nge Kieran Trippier kufuneka ulawulo lweengxaki ze-groin kunye Serge Aurier Kwakhona ukuxhatshazwa, u-Walker-Peters ubonwe njengomdlali olandelayo obalaseleyo kuloo ndawo. Ekugqibeleni, Mauricio Pochettino wenza amaphupha akhe azaliseke njengoko wayebiza u-Walker-Peters ukuba asayine isivumelwano sakhe sobugcisa eselinde ixesha elide kunye nesithandwa sakhe saseTottenham Hotspurs.
I-Kyle Walker-I-Peters Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts- Ulwalamano lobomi
Ngubani uKyle Walker-Peters Intombi?
U-Kyle Walker-Peters ungomnye walabo bhola bebhola abathandana nabo ababalekele ukuhlolisisa iliso loluntu nje kuphela ngenxa yokuba libucala okanye mhlawumbi lingafumaneki okwangoku. Bambalwa kakhulu abancinci bebhola baseNgilani abadlelwane babo bahamba kakhulu. Umzekelo opheleleyo Declan Rice.
I-Kyle Walker-I-Peters Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts- Ubomi bomntu
Ukumazi uKyle Walker-Peters ubomi bakhe buza kunceda ufumane umfanekiso opheleleyo.
Ukubonisa ukuba ulungile ngokwaneleyo isishwankathelo sebali likaHatter-Peters. Oku kusemsebenzini. Nangona kunjalo, kwinqaku lomntu, i-Walker-Peters ibonakalise ukuba yanele ngokwaneleyo kwi-console ye-PlayStation.
UKyle Walter-Peters akagcini nje ukudlala ibhola okanye imidlalo yevidiyo. Uyaziqhenya ngumdlali wezemidlalo oncedisayo kunye nabasebenzi bakhe be-Spurs kunye nabasebenzi abahambeleyo kwaye banike inkxaso ngoncedo olungaphantsi.
QHUBEKA: Siyabulela ukufunda iKyle Walker-Peters Childhood Indaba kunye ne-Untold Biography Facts. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ufumana into engabonakali kakuhle, nceda usabelo nathi ngokuphawula ngezansi. Siya kuhlala sixabisa kwaye siyihlonele imibono yakho.
UMarcus Rashford Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts